सभामुखमा सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा अग्नि प्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । आइतबारको संसद बैठकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जुन प्रस्तावमा नेकपाकै देव गुरुङ, ओनसरी घर्तीमगर र राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले समर्थन गरेका थिए । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका महन्थ ठाकुरले सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरे । गत असोज १४ गते कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त थियो । प्रतिनिधि सभाले करिब चार महिनापछि निर्विरोध नै सभामुख पाएको हो ।
सभामुखमा सापकोटाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । सभामुखमा सापकोटाको नाम प्रस्ताव गर्दै सुवास नेम्वाङले आफूहरूको चयन उपयुक्त भएको दाबी गरे । सभामुख चयनका लागि नेकपाले सापकोटालाई प्रस्ताव गर्दा प्रतिनिधिसभामा कसैले विकल्प अघि नसार्नुले सापकोटाको उमेदवारी उपयुक्त भएको पुष्टि भएको उनको भनाई थियो । सापकोटाले सिंगो संसदलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, सापकोटाको उमेदवारीमा समर्थन गर्दै नेकपा सांसद ओनसरी घर्तीमगरले सभामुखमा सर्वसम्मतिको अवस्था बनेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहित सबै दललाई धन्यवाद दिइन् । सापकोटा सभामुख बन्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
‘तटस्थ भएर संसदको गरिमा कायम राख्छु’
प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको ओज गरिमा कायम राख्नका लागि तटस्थ, निष्पक्ष, सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् । सभामुख निर्वाचित भएपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सापकोटाले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता कायम राख्न आफू इमान्दार भएर लाग्ने बताए ।
‘लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता, आदर्शलाई कायम गर्ने गरी नेपाली जनताको सार्वभौम सर्वोच्च संस्थाको ओज र गरिमा कायम राख्नका लागि तटस्थ, निष्पक्ष, सन्तुलित, भूमिका ‘निर्वाह गर्नका लागि म सँधैभरी दत्तचित्त भएर रहन्छु । इमानदारितापूर्वक लाग्छु’ सापकोटाले भने । सभामुखमा अर्को उम्मेदवार नउठाएकामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल, समाजवादी पार्टीलगायतलाई पनि धन्यवाद दिए ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सभामुखका लागि अगाडि बढायो । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी लगायत सबै पार्टीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । किनभने यसले निकै राम्रो संदेश गएको छ’ उनले भने ।
पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षमा अग्रता कायम अन्ततः नेकपा स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख निर्वा्चित भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायत कसैले पनि ७ माघमा उम्मेद्वारी नदिएपछि आइतबार सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
आइतबार नै उनको पुरानो मुद्दामा परेको नयाँ रिटको सुनुवाई रोकिएको थियो । इजलास तोकिएका न्यायाधीश पहिले यही मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता परेका कारण आइतबार सुनुवाई रोकिएको थियो । यसैले आइतबार, माघ १२ लाई सापकोटाको दिन भन्न सकिन्छ । तर, दिनहरू सँधै उस्तै हुँदैनन् । पूर्वमाओवादीका तर्फबाट बनेका तेस्रो सभामुख सापकोटाका पनि आउने दिनहरू यस्तै सजिला हुने छैनन् ।
कार्यसम्पादनमा सापकोटाका लागि केही विषय चुनौतिका रुपमा खडा हुनसक्ने देखिन्छन् । सभामुख चयनलाई लिएर विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट उत्पन्न नेकपाको शक्ति संघर्ष अझै टुंगिएको छैन, त्यसको असर संसदमा देखिने सम्भावना छ ।’ सापकोटालाई सभामुख बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटको अन्तिम सुनुवाई बाँकी नै छ । उनका लागि यो संसद बाहिरको चुनौति हुनेछ । किनभने, यो मुद्दामा धेरै अघिदेखिको हो र यसको होहल्ला निकै चर्को सुनिनेछ ।
यसबाहेक अहिले विपक्षी कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेद्वार नदिएर सापकोटाप्रति ‘नरम’ नीति अपनाए पनि संसद संचालनका बेला विपक्षीको आक्रामक रवैया सभामुख सापकोटाका लागि ‘चुनौती’ बन्न सक्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सभामुखका रुपमा सापकोटाका सामु चुनौतीको चाङ देख्छन् । लामो समय राजनीति गरेका र ३ पटक सांसद भए पनि सापकोटा पहिलोपटक सभामुख भएका छन्, त्यसैले केही समय उनलाई अनुभव अभावको पनि चुनौती बन्नेछ । संसदमा धेरैथरी मतलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उनीसँग हुनेछ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार काम गनुपर्ने चुनौतीले पनि सापकोटालाई छाड्ने छैन । एमसीसीलाई लिएर उत्पन्न विवाद चाँडै नै संसदमा प्रवेश गर्दैछ । त्यसैले यसलाई सकेसम्म कम विवादित बनाएर हल खोज्नुपर्ने चुनौती पनि देखिन्छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा सभामुख भएका सापकोटा अब सरकारका कामलाई संसदमा लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समन्वय गर्दै जानुपर्ने भूमिकामा छन् । यसरी हेर्दा ओली र दाहालबीच सन्तुलनको सम्बन्ध बनाउनुपर्ने अर्को चुनौती पनि देखिन्छ । र, सापकोटाका आगामि दिन कति चुनौतीपूर्ण छन् भन्नेकुरा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले संसदमा बोलेको कुराले प्रष्ट गर्छ ।
‘एउटा आवाज आएको छ । भोलीको दिन विधिको शासनले चल्छ चल्दैन? संविधानले भने अनुसारको बाटोमा हिँड्छ हिँड्दैन? लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्चिन्छ खुम्चिदैन? आशंका छन्, त्यो पाटो पार लाग्छ कि लाग्दैन,’ संसदमा सापकोटाका बारेमा बोल्दै रिजालले भने, ‘उहाँ (अग्नी सापकोटा)ले त्यो काम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? भरोसा जित्न सक्नु हुन्छ कि हुँदैन? नेपाली कांग्रेसको तपाईप्रति भरोषा छ । यी आशंकालाई भोली कार्यसम्पादन गर्नेक्रममा कसरी शान्त गर्दै जान सक्नु हुन्छ? यो तपाईको परीक्षा हो ।’
सापकोटालाई सभामुखको रुपमा संसदमा प्रस्ताव गर्दै नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले पनि सापकोटाका आगामि दिन चुनौतीपूर्ण छन् भन्ने संकेत गरे । ‘सिंगो संसदलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्ने भूमिका उहाँले पूरा गर्नुपर्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई स्थापित गर्ने प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्नुपर्छ । यो विश्वासमा उभिएर उहाँले संसदको नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ नेम्वाङ्ले भनेका छन् ।
२०१४ फागुन २४ गते सिन्धुपाल्चोकको कुभिन्डेमा जन्मिएका सापकोटा १५ बर्षको अध्यापन पेशा छाडेर राजनीतिमा होमिएका थिए । ०२९ सालमा विद्यार्थी संगठनमा आवद्व भएका सापकोटा ०३५ सालमा नेकपा (चौम) को सदस्य भएका थिए । ०३६ सालको जनमतसंग्रहको घोषणापछि शिक्षक संगठनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र महासचिव भए । शिक्षक संघर्षमा ०४२ सालमा करिब ४ महिना जेल बसेका थिए ।
०४८ मा शिक्षक पेशाबाट राजीनामा दिई राजनीतिमा सक्रिय भएका सापकोटा ०४९ मा संयुक्त जनमोर्चाको केन्द्रीय सदस्य भए । ०५१ मा नेकपा (एकता केन्द्र) को केन्द्रीय सदस्य र ०५१ असोजमा नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य भएका सापकोटा ०५२ माघदेखि भूमिगत भए । ०५२ फागुनबाट सुरु जनयुद्वको नेतृत्वमा पूर्वी उपक्षेत्रीय ब्यूरो इन्चार्ज, ०५७ मा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पोलिट्ब्युरो सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । ०५८ मा सरकारसँग वार्ता गर्न गठीत ३ सदस्यीय वार्ता टोलीको सदस्यका रुपमा उनी वार्तामा सहभागि थिए । ०६२ चैत १४ गते सिन्धुपाल्चोक ठोकर्पामा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गरेको हमलामा ३ वटा गोली लागेर उनी गम्भीर घाइतेका थिए ।
२०६९ माघमा भएको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनबाट पोलिटब्युरो सदस्यमा निर्वा्चित भए । ०६९ साउनमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) को स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ता भए । त्यसपछि ०७१ मा भएको विराटनगर सम्मेलनबाट स्थायी समिति सदस्यमा निर्वा्चित भएका सापकोटा ०७३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालय सदस्यका रुपमा थिए । उनी अहिले नेकपाको स्थायी समिति सदस्य छन् ।
लगातार ३ पटक सांसद निर्वाचित सापकोटा २ पटक मन्त्री भएका थिए । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वा्चित सापकोटा ०६८ वैशाख २२ गते नेपाल सरकारको सूचना तथा संचार मन्त्री भए । दोस्रो संविधानसभामा पनि सिन्धुपाल्चोक–२ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वा्चित भएका उनी ०७३ मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री भए । ०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सिन्धुपाल्चोक–१ बाट निर्वाचित सापकोटा अहिले त्यही संसदलाई नेतृत्व गर्ने भूमिकामा छन् । र, प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएसँगै संसदमा शुरु भएको छ ‘अग्नी परिक्षा’ ।
नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार ११ बजे शपथ ग्रहण गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभामुखमा निर्वाचित सापकोटालाई राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा ११ बजे शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम तय भएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए ।
सापकोटा आइतबार सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । उनी निर्वाचित भएको जानकारी संघीय संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आइतबार दिउँसो साढे ४ बजे जानकारी गराएको थियो ।
संसद सचिवालयको पत्र प्राप्त गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सोमबार ११ बजेका लागि तय गरेको छ । सापकोटाले सभामुख पदको शपथ ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको सचिव योगीले जानकारी दिए । सभामुखको पदभार ग्रहण गर्नेक्रममा प्रमाणीकरण गर्न बाँकी ५ विधेयकमध्ये कुनैमा हस्ताक्षर गर्ने कि सदनमा पठाउनुपर्ने विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । सभामुखले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहँदा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका ५ विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाँकी छ ।
संसदको चौथो अधिवेशनमा नै पारित भएका विधेयक तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार प्रयास आरोपमा राजीनामा दिएपछि प्रमाणीकरण हुन सकेका थिएनन् । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमका व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । हालैमात्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयकलाई संसद बैठकमा पठाउने निर्णयमा सभामुखबाट हस्ताक्षर गराएर पदभार गराउने कि भन्ने छलफलमा पनि संसद सचिवालय रहेको छ । सोमबार नै उनलाई सभामुख बनाउन नहुने भनी सर्वोच्चमा परेको रिटको पेशी तोकिएको छ ।
संसद बैठक मंगलबार
संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ । आइतबारको बैठकले अग्नि सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । सभामुख निर्वाचित गरेपछि बैठक माघ १४ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । अर्को बैठक सभामुख अग्नि सापकोटाले सञ्चालन गर्नेछन् । आइतबारको बैठक प्रतिनिधिसभाका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले सञ्चालन गरेका थिए ।
उपसभामुख माग्दैनौं ः कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.मिनेन्द्र रिजालले आफूहरूले कमण्डलु लिएर संसदमा उपसभामुख नमाग्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आइतबार सभामुख निर्वाचनका विषयमा पार्टी संसदीय दलको निर्णय जानकारी गराउँदै कांग्रेसले उपसभामुखको बार्गेनिङ नगरेको बताएका हुन् । कांग्रेसले सभामुखमा उमेदवारी नदिएको भन्ने कुराको खण्डन गर्दै उनले भने, ‘कांग्रेस कमण्डलु लिएर उपसभामुख माग्न संसदमा उपस्थित छैन । कमण्डलु लिएर आएका छैनौं प्रष्ट होस् ।’